Ny lahatsoratr'i Izabelle Hundrev momba Martech Zone
Lahatsoratra nosoratan'i Izabelle Hundrev
Izabelle Hundrev dia mpanoratra atiny mipetraka any Chicago ao amin'ny Directive. Mpitia maharitra mamaky teny sy manoratra izy, nahazo diplaoma tamin'ny asa fanaovan-gazety tao amin'ny University of Missouri tamin'ny taona 2017. Taorian'ny nahazoany diplaoma, dia nanomboka ny asany tamin'ny varotra B2B i Izabelle izay niasa manokana tamin'ny fampandrosoana orinasa. Taorian'ny fivarotana 1.5 taona dia niverina tany amin'ny fakany fanaovan-gazety izy ary nanao ny tetezamita tamin'ny marketing amin'ny atiny.
The Ultimate Tech Stack ho an'ireo mpivarotra be fampisehoana
Zoma, Septambra 11, 2020 Zoma, Septambra 11, 2020 Izabelle Hundrev
Tamin'ny 2011, nanoratra malaza ilay mpandraharaha Marc Andreessen, mihinana izao tontolo izao ny rindrambaiko. Amin'ny lafiny maro, marina ny tenin'i Andreessen. Eritrereto ny isan'ireo fitaovana rindrambaiko ampiasainao isan'andro. Ny smartphone iray dia mety manana rindranasa rindrambaiko an-jatony ao aminy. Ary fitaovana kely iray monja ao am-paosinao izany. Ankehitriny, andao ampiharina amin'ny tontolon'ny asa izany hevitra izany. Orinasa tokana afaka mampiasa vahaolana rindrambaiko an-jatony, raha tsy an'arivony. Manomboka amin'ny ara-bola ka hatrany amin'ny olombelona